प्रचण्डलाई माफी माग्न चौतर्फी दबाब – Rapti Khabar
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नुवाकोटको तामाङ केटीलाई विवाह गर्छु भन्दै काठमाडौंमा लगेर मुम्बई पु¥याएजस्तो उदाहरण दिएर बोलेको बोलीप्रति प्रवासमा रहेका तामाङ संघसंस्थासहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डको उक्त बोलीप्रति घोर आपत्ति जनाउदै तामाङ समाज अमेरिका र पोर्तुगलले विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
पोर्तूगलका सुनिता व्लोन तामाङद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘तामाङ महिलाको उदाहरण दिएर विदेशमा बेचिन बाध्य महिलाहरुलाई जुन प्रकारले मजाकको विषय बनाए, त्यो अति नै घृणित सोच र एकल जातीय अहंकारी मानसिकताको उपज हो ।’
देशको पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस्तो नश्लीय भावनासहितको अभिव्यक्ति दिनु हामी तामाङहरुको लागि मात्र नभएर देश र समग्र नेपाली जनताकै निम्ति अपहेलना भएको हाम्रो संस्थाको धारणा छ, तामाङ समाज अमेरिकाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रचण्डले तुरुन्तै सार्बजनिक रुपमा माफी माग्न र अब उप्रान्त कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले नश्लीय प्रोफाइलिंग हुने भावार्थको अभिव्यक्ति नदिन हुन तामाङ समाज अमेरिकाले अनुरोध गरेका छन् ।
यही सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा पनि उतिकै प्रतिक्रिया आएका छन् । कतिपय तामाङहरुले अपशब्द पनि प्रयोग गरेर आक्रोश पोखेका छन् ।
यसै सिलसिलामा राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्रचण्डले माफी माग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं संघीय सांसद बहादुरसिंह तामाङले पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भइसकेको नेकपाका अध्यक्षले यसरी तामाङको चेली र नुवाकोटकै उदाहरण दिएकोप्रति घोर भत्र्सना गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले राजनेतामाथिको विश्वास साँघुरिदै जाने बताए ।
नुवाकोट सन्दर्भ नै किन जोडियो ? यही सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य रमेशकुमार महतले पनि स्टाटसमा भत्र्सना गर्दै क्षमा याचनाको अपेक्षा गरेका. छन् । उनी लेख्छन्–‘कमरेड प्रचण्डको बिप्लव चन्दको सन्दर्भको अभिब्यक्ति सुने । त्यही वर्ग हिजो द्वन्दको समयमा लडाकुको रुपमा प्रयोग भए । तपाईलाई आज यो अवस्थासम्म पुर्याउन कसकसको योगदान थियो ? त्यो बिर्सेको जस्तो लाग्यो । अर्काे पक्ष, देश हाँक्छु भन्ने नेताले वर्ग बिशेष र नुवाकोट जिल्लालाई नै आँच पुग्ने अभिब्यक्ति दिन मर्यादाले मिल्छ ? उक्त अभिब्यक्तिको भत्र्सना गर्दै अभिब्यक्ति अबिलम्ब फिर्ता लिई क्षमा याचनाको अपेक्षा गर्दछु ।’
यसैगरी कांग्रेसका महासमिति सदस्य तिर्थ लामाले स्टाटसमा लेखेका छन्– ‘तामाङ चेलिबेटीको अस्मितामाथि कलंक र दाग लाग्ने उदहारण र अभिव्यक्ति दिन प्रचण्डलाई नेपालको संबिधानले अनुमति दियो ?’
यही विषयलाई लिएर प्रतिक्रिया बुझ्ने क्रममा नेकपा प्रदेश ३ का सह इञ्चार्ज एवं संघीय सांसद हितबहादुर तामाङले भने– ‘कुनै बेला पार्टी बैठकमा नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) जीले भन्नुभएको भनाइलाई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रसंगबस उदृढ गर्नुभएको कुरालाई लिएर जो पक्षबिपक्षमा तान्ने र राजनीतिक मसला बनाउने कोसिस भइरहेको छ । यसलाई दुर्भाग्य बाहेक अरु केही पनि होइन । किनकी यो भनाइ कमरेड प्रचण्डको होइन । उहाँले त्यस्तो कुनै जाति बिशेषलाई लक्षित गरि बोल्नु भएको होइन । आज यो बिषयलाई जजस्ले अनावश्यक राजनीतिक रुप दिन र साम्प्रदायिक भड्काउ दिन खोजिरहेका छन् । तिनका बिगत हेर्दा पनि अझ प्रष्ट हुदै गइरहेको छ ।
जसले उत्पीडित समुदायको लागि लड्यो र मुलुकमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समाबेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि अझ पनि लडिरहेको छ । उसलाई नै के निहँु पाउ कनिका पोखाउ जस्तो गर्न खोज्नु राजनीतिक रुपले बेइमानी पनि हो ।
यस्तो प्रबृत्ति देखाउनु भनेको पुर्नात्थानवादीहरुलाई सहयोग पुर्याउनु पनि हो । त्यसै वास्तविकतालाई बुझौ र पात्रहरुको बिगत तथा बर्तमानलाई पनि हेरौ अनि निष्कर्ष निकालौ । अनावश्यक सामाजिक दिग्भ्रम फैलाउने कोसिस नगरौं । सम्बन्धित सबैलाई मेरो यही अपिल छ ।’
जसले जे जस्तो प्रतिक्रिया दिएपनि संविधानमा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको भाग–३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्र्तगत धारा २४ को उपधारा (३) बमोजिम ‘उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।